Maxay ka dhigan tahay in Qatar ay Soomaaliya usoo dirtay safiir sare? - Caasimada Online
Home Maqaalo Maxay ka dhigan tahay in Qatar ay Soomaaliya usoo dirtay safiir sare?
Maxay ka dhigan tahay in Qatar ay Soomaaliya usoo dirtay safiir sare?
Amiirka dalka Qatar Tamiim Bin Xamad, ayaa dhawaan u soo magacaabay Soomaaliya Safiir Sare oo magaciisa la yiraahdo Xasan Xamse Asad Haashim. Waana siyaasi aysan Soomaalidu horay u aqoon. Ka hor inta aynaan u galin fallanqeynta waxa arinkani ka dhiganyahay,aan aqristayaasha la wadaaggo marka hore, waa maxay Ergay Sare ” Ambassador Extraordinary?